Fifidianana mpisolo tena inona no atao hoe « fisoloan-tena » ?
Eo ankatoky ny fifidianana Filoha amin’ny 16 desambra 2001 dia mitombo ny fanamarihana sy fifanoherana mikasika ny « toetra folon’ny kandidà mendrika amin’ny fifidianana ho Filoha » navoakan’ny FFKM. Nanomboka tamin’ny fanambaram-pilatsahan-kofidina ho Filoha amin’ny 16 desambra 2001 nataona olona 6 tamin’ny 1 oktobra 2001 ary noho ny tsy fahafahana mitady izay hevitra hifidianana ny kandidà tsara dia latsaka ao anatin’ny fahasahiranan-tsaina ny vahoaka. Noraisin...
Mba hisian'ny fifidianana marina sy mangarahara
Miha mafana ny ady hevitra eo amin’ny vahoaka sy eo amin’ny fitaovam-pampahalala-baovao momba ny fomba tsara indrindra hisian’ny fifidianana marina sy mangarahara eo ankatokin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika amin’ny 16 desambra 2001. Tetika sy paika isan-karazany no ampiasain’ny fitondrana hahazoan’antoka ny fandaniana ny Filoha teo aloha amin’ny fampihenana mafy ny fahazoa-mihetsiky ny mpanohitra, anisan’izany ny fanafoanana ny tombontsoa a...
Fahalalahana hiteny sy fahalalahana an-gazety
Nanomboka tamin’ny fihetsiketsehana novelomin’ny mpanohitra momba io raharaha io sy indrindra ny fanambaram-pilatsahan-kofidiana ho Filoha nataon’ny Filoha teo aloha, ny 26 jiona 2001, dia voamarika ny fitombon’ny famerana, fanaraha-maso na fandrahonana an’ny gazety : fiantsoana mpanao gazety halaina am-bavany any amin’ny biraon’ny polisy, fitoriana an’ireo mpanao gazety ataon’ny mpitondra fanjakana noho ny « fanalam-baraka » na « fampielezana vaovao tsy marina »...
Ny zo tsy hiharan'ny lalàna sy ny ambodiomby ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny solombavambahoaka sy loholona
Araka ny fanapahana noraisiny tamin’ny fivoriana nataony ny 1 ka hatramin’ny 6 aprily 2001 ary navoaka an-gazety dia voavalin’ny Fivondronan’ny Loholona sy Solombavambahoaka ny taratasy nalefan’ny « Vondrona miatrika ny krizy » tamin’ny 23 mars 2001. Nolazainy tamin’izany ny tsy fiombonany hevitra amin’ny fitondram-panjakana malagasy momba ny endrika fahatratrarana ambodiomby nitoriana an’Atoa Voninahitsy Jean Eugène. Niteraka ady hevitra lehibe, izay nampir...
Fahalalahan'olom-pirenena sy famerana ny zo hivory
Ny rindran-damina mametraka an’ireo fahalalahana eo anatrehan’ny Fanjakana eto Madagasikara dia voafaritr’ireo fifanekena iraisam-pirenena momba ny zon’olom-belona. Tsy vitan’ny efa nankatoavin’ny Fanjakana malagasy ireo fifanekena ireo fa mbola eken’ny Lalàmpanorenana sy ny didy amam-pitsipikamitohitohy koa.
Ankapoben-kevitra momba ny fahalalahana eo anatrehan’ny Fanjakana A. Inona no atao hoe fahalalahana eo anatrehan’ny Fanjakana ?
Aleo ny hoe «...
Fahalalana hanao fivoriana
Toe-javatra niseho teo amin’ny sehatra politika ka niaraha-niaina tamin’ny vahoaka
Vanim-potoana lehibe eo amin’ny tantaran’ny fiainana politika eto Madagasikara ny roa tokom-bolana namarana ny taona arivo faharoa izay kihon-dalana nampikorosy fahana haingana ny tontolo politika, ny fiharian-karena ary ny fiainam-piarahamonina eto amin’ny firenena. Nanampy trotraka koa moa rahateo ny fahantrana mangitsoki-tsoka nahalatsahan’ny mponina.
Mpandinika ny fiara...